Bit By Bit - Kucherechedza maitiro - 2.4.3 Approximating kuedza
Tinogona paiva kuedza kuti hatigoni kuita. Nzira mbiri kuti kunyanya kubatsirwa digitaalinen zera vari chienderane uye dzinongoitika kuedza.
mibvunzo yakawanda inokosha zvesayenzi uye mitemo zviri causal. Ngationei Somuenzaniso, mubvunzo inotevera: chii zvinoita basa Purogiramu yokudzidzisa iri mubayiro? Imwe nzira kupindura mubvunzo uyu yaizova aine randomized kudzorwa kuedza apo vashandi randomly basa kana kudzidziswa kana kwete kudzidziswa. Zvadaro, vatsvakurudzi aigona kufungidzira migumisiro kudzidziswa vechikamu izvi nokungomaka kuenzanisa mubairo vanhu vakagamuchira kudzidziswa avo kudzigamuchira.
The nyore Kuenzanisa chinonzi nokuda chinhu zvinoitika pamberi mashoko akanga kunyange inounganidzwa zvinoti: randomization. Pasina randomization, dambudziko riri trickier zvikuru. Mumwe mutsvakurudzi chaizoenzana mubairo vanhu akasaina nokuzvidira nokuda yokudzidziswa vaya vasina kusaina-up. zvimwe kuti kuenzanisa zvaizoratidza kuti vanhu vakagamuchira kurovedza akawanazve mamwe, asi sei zvakawanda izvi nokuda kurovedza uye sei zvakawanda izvi nokuti vanhu kusaina-up chokurovedza yakasiyana vasingaendi wemasaini nokuti kudzidziswa? Nemamwe mashoko, zvingava zvakarurama kuenzanisa mibairo mapoka aya maviri evanhu?
Izvi nezvemhosva wakanaka kuenzanisa anotungamirira vamwe vaongorori kuti vatende kuti hazvibviri kuti causal kufungidzira pasina kumhanya chinhu chakaitwa. murandu uyu anoenda zvakare kure. Kunyange zvazvo chiri chokwadi kuti kuedza kupa uchapupu hwakasimba nokuti causal zvinokonzerwa, pane dzimwe nzira dzinokwanisa zvokuzobatsira causal inofungidzirwa. Pane kufunga kuti causal inofungidzirwa zvichida nyore (panyaya kuedza) kana zvisingaiti (panyaya tinyerere akacherechedza mashoko), zviri nani kufunga nzira yokuita causal inofungidzirwa nhema pamwe continuum kubva chokuramba dukusa (Figure 2.4). Panguva akasimba kuguma continuum vari randomized kudzora kuedza. Asi, izvi kazhinji zvakaoma kuita munzanga tsvakurudzo nokuti kurapwa zhinji zvinoda zvisingaitiki yakawanda pamwe nehurumende kana makambani; zvikuru nyore pane kuedza zvakawanda kuti hatigoni kuita. Ndichaita chakayerisirwa vose Chapter 4 vose zvinokwaniswa kunoongorora randomized dzinodzorwa kuedza, uye ndichanwisa nharo kuti mune zvimwe zviitiko, pane simba chemufungo zvikonzero kuti vanosarudza observational kuti experimental nzira.
Figure 2.4: Continuum kutsvakurudza nzira vanofungidzirwa causal migumisiro.
Kufambira achitevedza continuum, pane mamiriro ezvinhu apo vatsvakurudzi havana zvakajeka randomized. Izvozvo, vatsvakurudzi kuedza kudzidza kuedza-kufanana ruzivo pasina chaizvoizvo kuita chinhu kuedza; sezvingatarisirwa, izvi achava runonyengera, asi hombe mashoko zvakunowedzera zvikuru kukwanisa kwedu kuita causal nokufungidzira mumamiriro ezvinhu aya.
Dzimwe nguva pane muzviruva apo randomness munyika zvinoitika chokusika chinhu sezvinoita kuedza kuti vaongorori. Mazano aya anonzi dzinongoitika kuedza, uye ivo huchakurukurwa zvakadzama muChikamu 2.4.3.1. Two zviri guru mashoko zvinyorwa-avo nguva dzose-pasi hunhu uye uduku-kwazvo chinotibatsira kudzidza kubva dzinongoitika kuedza paanenge.
Kufambira mberi kubva randomized kudzorwa kuedza, dzimwe nguva hapana kunyange chiitiko zvakasikwa kuti tinogona kushandisa paiva dzinongoitika chiedzwa. Muzviruva izvi, tinogona nokungwarira kuvaka kuenzanisa mukati isiri experimental Data mukuedza paiva kumwe kuedza. Mazano aya dzinonzi enzanirana, uye ivo huchakurukurwa zvakadzama muChikamu 2.4.3.2. Kufanana dzinongoitika kuedza, enzanirana ndiwo magadzirirwo kuti unobatsirawo kubva guru mashoko zvinyorwa. Kunyanya, hombe kukura-zvose maererano nokuwanda nyaya uye mhando mashoko paminiti nyaya-kwazvo hwezvekukurukurirana enzanirana. Chinokosha musiyano dzinongoitika kuedza uye enzanirana ndechokuti dzinongoitika kuedza nevatsvakurudzi anoziva muitiro kuburikidza iyo kurapwa akanzi uye anotenda kuti chero.
Pfungwa akanaka mienzaniso chakakuridzira kuchiva kuita kuedza zvakare irimo zviviri zvingaitwa nzira: dzinongoitika kuedza uye enzanirana. Nzira idzi kuchaita kuti ukwanise kufungidzira causal migumisiro kubva tinyerere kuchengetwa mashoko Muchifukura wakanaka kuenzanisa agere mukati mashoko kuti iwe watova.